MailSpring forogo yeNylas Mail | Linux Vakapindwa muropa
MailSpring forogo yeNylas Mail
Panguva ino ndichatora mukana wekutaura newe nezve MailSpring inova email mutengi yemahara multiplatform iyo akazvarwa seforogo yeNylas Mail iyo yaive neakanakisa, yakachena yakachena interface uye kubva pane yangu maonero imwe yeakanakisa maererano neemail vatengi.
mailspring Yakabuda seprojekti naBen Gotow aive mumwe wevanogadzira Nylas, uyo akasarudza kuenda nenzira yake ega, achifunga kuti anogona kuve iye mutengi akanakisa.
Tinogona zvakare kuratidza kuti mutengi akavakwa kuburikidza newebhu matekinoroji (Electron, Flux, React) neizvo zvinopa kukurumidza kana uchifananidza maemail ako, uchishandisa 50% isingasviki RAM pane Nylas Mail.
1 Dhawunirodha Mailspring
1.1 Isa Mailspring pane Debian uye zvigadzirwa
1.2 Isa Mailspring pane Fedora uye zvigadzirwa
1.3 Isa Mailspring paLinux uchishandisa Snap
Sezvandambotaura, iyo application ndeye multiplatform saka tinogona kurodha pasi mutengi weLinux, Mac kana Linux. Tinogona kuita izvi kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti ini ndinosiya iyi link pano.
Isa Mailspring pane Debian uye zvigadzirwa
Isu zvakare tine chikumbiro chakapakirwa mune dhiza faira iyo yatinogona kuisa mutengi mune chero kugovera kunoenderana neDebian / Ubuntu, iwe unofanira kungozvirodha pasi. kubva pano uye isa iyo neyedu package package.
Isa Mailspring pane Fedora uye zvigadzirwa
Muchiitiko cheFedora uye zvigadzirwa zvayo, kune zvakare iyo rpm package iyo yatinomisikidza neyedu package package, chinongedzo che kurodha ndeichi.
Isa Mailspring paLinux uchishandisa Snap
Panyaya yekumwe kugoverwa, haufanire kunetseka sezvo iko kunyorera kuri zvakare mune snap package saka tinogona kuzviita gadza kubva pano.
Pasina imwezve ado, kunyangwe paine vatengi vakati wandei veemail kubva pane zvakaitika kwandiri neN1 (Nylas), zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ndeimwe yeavo vane interface yakanyatsogadzirwa.
Kana iwe uchiziva chero mumwe mutengi uyo akakodzera kutaura nezvake, usazeze kugovana nesu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » MailSpring forogo yeNylas Mail
Insync muchinjika-chikuva Google Drive mutengi
Miswe vhezheni 3.3 ikozvino yavapo